दोस्रो बजारमा करीब ७० अंकले परिसूचक बढ्दा नेप्सेमा हाल सम्मकै उच्च कारोबार
९ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट
फागुन ११, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार नेप्से परिसूचक उच्च अंकले बढेर बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबार अवधिभर परिसूचक ६९ दशमलव ५६ अंक बढेर १ हजार ५०४ दशमलव १४ को विन्दुमा बन्द भएको छ । उच्च अंकले बढेर बन्द भएको बजारमा कारोबार रकम रू.३ अर्ब ६० करोड नाघेको छ ।
यो नेप्सेमा एकदिनको कारोबारमा हालसम्मकै उच्च रकम हो । यस दिन १ हजार ४३५ दशमलव ८७ विन्दुबाट शुरू भएको कारोबार पहिलो ४० मिनेटमा सामान्य घटेर १ हजार ४५२ को विन्दुमा रहेको परिसूचक निरन्तर उकालो लागेर दोस्रो घण्टामा यस दिनकै उच्च १ हजार ५०९ दशमलव ९२ विन्दुसम्म पुगेको हो । त्यसपछि सामान्य घट्बढ भएको परिसूचक अन्तमा बढेर बन्द भएको हो ।
गत साता बिहीवार करिब ३० अंकले बढेको बजारमा उच्च कारोबार भएको थियो । सो दिन नयाँ रेकर्ड बनाएको बजारमा यस दिन पुन : उच्च रकमको कारोबार हुँदा बजारले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ ।
यस दिनको परिसूचक २६ महीना यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यस अघि २०७४ पुस ३ मा नेप्से परिसूचक १ हजार ५०८ दशमलव २५ विन्दुमा रहेको थियो ।
आइतवार कारोबारमा आएका १२ समूहकै परिसूचक बढेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से परिसूचक बिहीवारको तुलनामा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत बढ्न पुगेको हो । आइतवारको कारोबारमा बैंकिङ समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहँदा समग्र परिसूचकमा उच्च अंकको वृद्धि भएको देखिन्छ ।
यस दिन व्यापार समूहको परिसूचक सर्वाधिक ८ दशमलव २५ प्रतिशत बढेको छ भने बैंकिङ समूहको परिसूचक ७ दशमलव १५ प्रतिशत बढेको छ ।
यस्तै, विकास बैंकको ४ दशमलव ५० प्रतिशत बढेको छ भने जलविद्युत्, वित्त र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।
यस्तै बढेर बन्द हुनेमा लघुवित्त, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने निर्जीवन बीमा र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी र ओरियन्टल होटलको शेयरमूल्य घटेर कारोबार हुँदा होटल समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमात्र बढेर बन्द भएको छ ।
आइतवार कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड
उच्च अंकले बढेर बन्द भएको बजारमा कारोबार अवधिभर रू.३ अर्ब ६० करोड ८५ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । जुन एक दिनको कारोबारमा हालसम्मकै उच्च हो ।
बिहीवारका तुलनामा यस दिन कारोबार २९ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । बिहीवार रू. २ अर्ब ७८ करोड बराबरको कारोबार भएको थियो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने १ दशमलव ५८ अंक बढेर २८५ दशमलव ८२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
आइतवार उच्च अंकले बढेर बन्द भएको बजारमा ९ कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
जसमध्ये फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स, एनएमबि बैंक, स्वदेशी लघुवित्त, कालिका माइक्रोत्रेडिट, मेगा बैंक, आरएसडिसी लघुवित्त, एभरेष्ट बैंकको प्रिफेरेन्स शेयर, एसबीआई बैंक र आइसीएफसी फाइनान्स रहेका छन् ।
यसका साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, रिलायन्स फाइनान्स र सानिमा बैंक शेयरमूल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढी बढेका छन् । शेयरमूल्य घटेर कारोबार हुनेमा भने तारागाउँ रिजेन्सी होटलको शेयरमूल्य ५ दशमलव ६८ प्रतिशत घटेको छ ।
कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू.३१५ मा सिमित छ । यस्तै, वरुण हाइड्रोपावरको शेयरमूल्यमा ५ दशमलव शून्य ५ ले कमी हुँदा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ९४ कायम रहेको छ ।
आइतवार एनएमबि बैंकको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको २ लाख ८४ हजार २९ कित्ता शेयरको खरीदविक्री हुँदा रू.१२ करोड ५६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य भने प्रतिकित्ता रू.४५४ पुगेको छ ।
कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको रू.११ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.१ हजार २९० रहेको छ । यी दुई कम्पनी लगायत शिखर इन्स्योरेन्स र हिमालयन डिस्टिलरीको रू.१० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १७८ कम्पनीमा १४२ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने २७ कम्पनीको घटेको छ । साथै ९ कम्पनीको शेयरमूल्य भने स्थिर छ ।